WinToFlash [बुटेबल USB सृष्टिकर्ता] किन्न एक लाइसेन्स कुञ्जी
आधारभूत कार्यहरु गर्दै छन् 100% मुक्त.
किन्न अधिक सुविधाहरू लागि व्यावसायिक वा व्यापार प्रयोग
तपाईं गर्न सक्छन् allays डाउनलोड र प्रयोग WinToFlash लाइट मुक्त लागि. यो मा सीमित कार्यहरु, तर समाधान गर्न सक्छन् सबै घर प्रयोगकर्ता समस्या Windows जस्तै reinstallation. If you are यो व्यावसायिक र आवश्यकता अतिरिक्त सुविधाहरु - एक लाइसेन्स किन्न.
यो पृष्ठ संग तपाईं प्रदान छोटो विवरण WinToFlash संस्करणहरू र सूची लागि लिंक खरीद. Navigate to wiki पृष्ठ लागि विस्तृत तुलना को सबै WinToFlash विशेषताहरु.
किन्न WinToFlash घर
निस्सन्देह, WinToFlash लाइट मुक्त छ । तर यदि WinToFlash थियो उपयोगी लागि तपाईं या तपाईं बस चाहनुहुन्छ समर्थन गर्न विकास - किन्न व्यक्तिगत लाइसेन्स । यो जस्तै छ एक दान तर राम्रो!
यो लाइसेन्स को लागि छ, एक व्यक्ति र एक साथ स्थापना मा एक पीसी छ ।
किन्न WinToFlash घर को लागि $5.77 वा बढी सिक्न मा wiki
किन्न WinToFlash व्यावसायिक
यो लाइसेन्स भन्छन् कार्यहरु को लागि व्यावसायिक प्रयोगकर्ता: प्रणाली प्रशासक, डेवलपर्स र अन्य आईटी पेशेवरों.
यो लाइसेन्स छ, एक व्यक्ति को लागि र5साथ प्रतिष्ठानहरु मा विभिन्न पीसी ।
किन्न WinToFlash व्यावसायिक लागि $29.95 वा बढी सिक्न मा wiki
किन्न व्यापार WinToFlash
तपाईं प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ WinToFlash व्यापार को लागि एक लाइसेन्स किन्न व्यापार लागि संस्करण.
यो लाइसेन्स को लागि छ5व्यक्ति र असीमित प्रतिष्ठानहरु मा विभिन्न पीसी मा आफ्नो कम्पनी हो ।
किन्न WinToFlash व्यापार को लागि $100 वा बढी सिक्न मा wiki
हामी तपाईं पठाउन लाइसेन्स फाइल मा ई-मेल लगाव पछि तुरुन्त भुक्तानी प्रक्रियामा छ । यो फाइल "जस्तै WinToFlash 521447.nkey.txt" संलग्न email. पनि हामी पठाउन आधारभूत लाइसेन्स फाइल स्थापना निर्देशन र समर्थन सम्पर्क जानकारी. पढ्नुहोस् विस्तृत निर्देशन बारे WinToFlash सक्रियता मा wiki.
कृपया पक्का तपाईं प्राप्त गर्न सक्छन् इमेल देखि support@novicorp.com. पहिले किन्न थप्न कृपया यो ई-मेल गर्न आफ्नो सेतो सूची ।
If you didn ' t get लाइसेन्स फाइल मा एक घण्टा कृपया तपाईँको "स्पाम" वा "जंक" फोल्डर. तपाईं चाहनुहुन्छ भने हामीलाई फेरी लाइसेन्स फाइल तपाईं को लागि कृपया हामीलाई थाहाछ ।
WinToFlash लाइट संस्करण लागि मुक्त छ, गैर-व्यावसायिक (घर वा शैक्षिक संस्था) प्रयोग. यदि तपाईं को आवश्यकता अतिरिक्त कार्यहरु किन्न व्यावसायिक लाइसेन्स । को लागि प्रयोग लागि व्यापार किन्न WinToFlash व्यापार लाइसेन्स ।
WinToFlash वितरित छ रूपमा "छ". कुनै पनि प्रकारको कुनै ग्यारेन्टी छ, व्यक्त वा अव्यक्त. तपाईं प्रयोग आफ्नो जोखिम मा छ । Novicorp लागि उत्तरदायी हुने छैन डेटा हानि, हर्जाना, हानि, लाभ वा कुनै पनि अन्य प्रकारको को हानि, जबकि प्रयोग वा दुरुपयोग this software.
स्थापना र प्रयोग WinToFlash अर्थ पनि स्वीकृति यी र शर्तहरुलाई को लाइसेन्स छ ।
डाउनलोड पूर्ण पाठ EULA (En-अमेरिका)